Maharitra hafiriana ny famahana ny bateria iPad Pro? Vaovao IPhone
Ny famaritana anatiny ny iPad Pro dia manomboka miseho na dia mbola tsy misy aza ny mividy na ny fikarohana voalohany an'ny iFixit dia vita. Ho an'ny mpikirakira A9X dia mila ampiana ny 4GB RAM, ampitomboina avo roa heny ny an'ireo rahalahiny kely kokoa, ny iPad Air 2 ary Mini 4, ary manome azy io hery manta tadiavin'ny solosaina finday maro ankehitriny. Ary ny bateria? Ny fitaovana iray mitovy habe aminy ary miaraka amin'ity efijery ity dia tsy maintsy manana bateria goavambe hahafahany mahatratra ny 10 ora fizakan-tena nampanantenain'i Apple. SAINGY ny tena izy dia kely kokoa noho ny an'ny iPad 3 sy 4 ny batterie, ary kely kokoa noho ny an'ny iPad Air and Air 2 fotsiny.
Ny iPad Pro dia manana bateria 38.5 WHr amin'ny karazany mitovy amin'ny teo alohany, ary ao anaty boaty no ahitantsika ny charger 12W iPad mahazatra. Andao ampitahaina ity maodely ity amin'ny an'ny maodely iPad rehetra nisy hatrizay:
Araka ny hitanao, ny iPad Pro dia eo anelanelan'ny iPad Air sy ny iPad 3 sy 4. Ahoana no ahafahan'ny iPad manana an'io efijery io sy ilay hery manana batterie kely kokoa noho ny iPad 3 sy 4 taloha, kely kokoa sy betsaka tsy matanjaka? Tsotra tokoa ny fanazavana: raha nijanona nandritra ny taona maro ny bateria tsy nisy fanatsarana lehibe izay mampitombo ny fiainany, ny efijery sy ny processeur dia nahavita nampihena ny fanjifany ka tsy azo eritreretina taona vitsivitsy lasa izay. Amin'izany no ahatongavantsika fa fitaovana mahery vaika kokoa, miaraka amina vahaolana avo lenta kokoa sy efijery lehibe kokoa, mandany kely noho ny iray tranainy misy famaritana ratsy kokoa.
Mety nomen'i Apple bateria bebe kokoa ve ny iPad Pro? Ny fahaleovan-tena folo ora dia toa ampy ho an'ny andro fiasana, nefa tsy mampaninona mihitsy ny manana bateria ora maro. Toa lojika io fanambarana io ary azo antoka fa maro aminareo no mieritreritra izany. Saingy ny zavatra toa zavatra ratsy amin'ny farany dia mandeha amin'ny tombotsoan'ireo izay mividy ilay fitaovana, satria ny fananana an'io bateria io fa tsy lehibe kokoa, dia tratrany, amin'ny lafiny iray, fa manohy manompo ireo charger efa misy, ary koa tsy miakatra ny ora fiampangana. Raha toa ka naharitra adiny 3 teo ho eo ny iPad 4 sy 5 hiampangana tanteraka ny charger ofisialy, ity iPad Pro ity dia tokony homena vola amin'ny fotoana fohy kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Haharitra hafiriana ny fakana ny bateria iPad Pro?
ramonol dia hoy izy:
Ity fanjohian-kevitra ity ihany dia azo ampiasaina hanaovana zavatra mitombina kokoa hampihenana ny haben'ny bateria ao amin'ny iPhone 6S sy iPhone 6S Plus vaovao ary efa mandany fitsikerana anao izany. Ny fidiran'ny singa vaovao amin'ny takelaka dia afaka nanery io fihenam-bidy io fa raha ny mifanitsy aminy dia mety tsy voamarika io fihenam-bidy io momba ny fitaovana iPhone 6 sy iPhone 6 Plus.
Tsy maintsy omena fotoana.
Mamaly an'i ramonol
Araka ny lazain'i Apple dia mitovy ny fiainana bateria, ary amin'ireo zavatra ireo dia tsy mamitaka matetika izy io.